‘दराज नव वर्षको भव्य सेल’ सुरु, विभिन्न उत्पादनमा अनेक छुट Bizshala -
राष्ट्रपति बन्नै लाग्दा थाहा भो-उनी त जासूस पो रहेछन् !
मौद्रिक नीतिको समीक्षाको परिसंघबाट स्वागत, आर्थिक वृद्धिमा सहयोग पुग्ने
स्टार्टअप वर्ल्डकप नेपालको फाइनल बुधबार, विश्व विजेता बने रु.१२ करोड पुरस्कार
सबै उमेर समूहमा तीव्र संक्रमण गर्नसक्ने कोरोनाको नयाँ भेरिएन्ट नेपालमा फेला
‘दराज नव वर्षको भव्य सेल’ सुरु, विभिन्न उत्पादनमा अनेक छुट
काठमाण्डौ । नेपालको अग्रणी अनलाइन बजार र अलिबाबा समूहअन्तर्गतको दराजले ‘नव वर्षको भव्य सेल’ अनेक छुट लिएर आएको छ। यो अभियान चैत २९ गतेदेखि वैशाख ७ गतेसम्म चल्नेछ।
नयाँ वर्षको भव्य सेल भनेर परिचित यस अभियानमा विभिन्न उत्पादनहरुमा मूल्य कटौती छ। उदाहरणका लागि ४६ हजार ७२० रुपैयाँको वल्पुल डबल डोर फ्रिज जम्मा ३८ हजार ९९९ रुपैयाँ, ६८ हजार ५९० रुपैयाँ पानासनिक फ्रन्ट लोड वासिङ मेसिन जम्मा ५७ हजार ९९९ रुपैयाँमा, डेल वोस्ट्रो आई–थ्री ल्याप्टप मात्र ५४९ हजार ९९ रुपैयाँमा र वन प्लस नोर्ड १०० केवल ३३ हजार ९०० रुपैयाँमा उपलब्ध हुनेछन्।
विभिन्न उत्पादनहरु जस्तै– घरका सामान, ग्याजेट, फेसन, किराना सामानलगायत पनि छुट उपलब्ध हुनेछन्। साथै, पूर्वभुक्तानी छुट, भाउचर र सीमित उत्पादनहरूमा निःशुल्क सपिङमार्फत अधिक बचतका लागि सम्भावनाहरू पनि छन्।
यस अभियानको बैंक पार्टनर छुट निम्नानुसार छन्–
– नबिल बैंक : डेबिट कार्डमा १५ प्रतिशत (रु. १०००) सम्म छुट र क्रेडिट कार्डमा २० प्रतिशत (रु . १५००) सम्म छुट।
– सानिमा बैंक : डेबिट कार्डमा १५ प्रतिशत (रु. १०००) सम्म छुट र क्रेडिट कार्डमा २० प्रतिशत (रु. १५००) सम्म छुट।
– एनएमबि बैंक : डेबिट कार्डमा १५ प्रतिशत (रु. १०००) सम्म छुट र क्रेडिट कार्डमा २० प्रतिशत (रु . १५००) सम्म छुट।
– मेगा बैंक : डेबिट कार्डमा १५ प्रतिशत (रु. १०००) सम्म छुट र क्रेडिट कार्डमा २० प्रतिशत (रु . १५००) सम्म छुट।
– कुमारी बैंक : डेबिट कार्डमा १५ प्रतिशत (रु. १०००) सम्म छुट र क्रेडिट कार्डमा २० प्रतिशत (रु . १५००) सम्म छुट।
– माछापुच्छ्र् बैंक : डेबिट कार्डमा १५ प्रतिशत (रु. १०००) सम्म छुट र क्रेडिट कार्डमा २० प्रतिशत (रु . १५००) सम्म छुट।
– सन् राइज बैंक : डेबिट कार्डमा १५ प्रतिशत (रु. १०००) सम्म छुट र क्रेडिट कार्डमा २० प्रतिशत (रु . १५००) सम्म छुट।
– एनआईसी एशिया बैंक : डेबिट कार्डमा १५ प्रतिशत (रु. १०००) सम्म छुट र क्रेडिट कार्डमा २० प्रतिशत (रु . १५००) सम्म छुट।
– स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंक : डेबिट कार्डमा १५ प्रतिशत (रु. १०००) सम्म छुट र क्रेडिट कार्डमा १५ प्रतिशत ( रु. १०००) सम्म छुट
– हिमालयन बैंक : क्रेडिट कार्डमा २० प्रतिशत (रु. १५००) सम्म छुट।
साथै, ग्राहकले आफ्नो ई–सेवा वालेटका माध्यमबाट भुक्तानी गरे सीमित घन्टाका लागि ५०० रुपैयाँ सम्मको विशेष छुट पाउन सक्नेछन्। यसबाहेक भिजा कार्डधारकहरूले दराजमा आफ्नो पहिलो खरिदमा पूर्वभुक्तानी गर्दा २० प्रतिशत छुट (अधिकतम रु. ५००) पाउनेछन्।
यसैगरी एनआईसी बैंक, सनराइज बैंक लिमिटेड, सिटिजन्स बैंक र माछापुच्छ््रे बैंकका ग्राहकले ० प्रतिशत ब्याजदरमा सजिलो मासिक किस्तमा (ईएमआइै) लिन सक्नेछन्।
यस अभियानमा ‘खेल १ रुपैयाँको’ (वन रुपी गेम) जस्ता खेलहरू पनि प्रस्तुत गरिएको छ। जसमा दराज प्रयोगकर्ताले वन प्लस एन १००, डिजिकम ब्लुटुथ मल्टिमेडिया स्पिकर, एक्स–एज ट्याब ४० जस्ता पुरस्कारमात्र १ रुपैयाँमा जित्न सक्छन्। भाग लिनका लागि उनीहरूले खेलमा चित्रित उत्पादन आफ्नो कार्टमा राख्नुपर्छ र बैंक कार्ड ार्फत १ रुपैयाँ तिरी चेक आउट गर्नुपर्छ। दराजले विजेताहरूको घोषणा गरेपछि सबै सहभागीलाई रुपैयाँ १ फिर्ता गर्नेछ।
नव वर्षको भव्य सेल नेपालमा अहिलेसम्म दराजकोे सबैभन्दा ठूलो सेल अभियान रहेको कम्पनीको दाबी छ। बिक्रेताहरु तथा भुक्तानी र डेलिभरी साझेदारहरूको चरम तयारी यसमा रहेको कम्पनीले जनाएको छ। तसर्थ, विविध उत्पादनहरुका साथ यो भव्य सेललाई नेपालको ४५ भन्दा बदी सहरहरुमा रहने ग्राहकसामु पुर्याउन निकै उत्साहित रहेको कम्पनीको भनाइ छ। ‘हामी उच्चतम सन्तुष्टि सुनिश्चित गर्न हामी हाम्रा हजारौँ साझेदारहरूसँग गम्भीरताका साथ गरिरहेका छौँ। यो नेपालको सबैभन्दा ठूलो अनलाइन सपिङ प्रदायकका रूपमा हाम्रो जिम्मेवारी हो’, दाराज एमडी लिनो अहलरिंगले भने।
यस अभियानमा सबैका लागि केही चीज छ किनकि दराजले हजारौँ विभिन्न बिक्रेतामार्फत ५ लाखभन्दा बढी उत्पादनहरू आफ्नो अनलाइन बजारमा समावेश गर्दछ। यस दराजको नव वर्ष सेलमा बिक्रेता र ब्रान्डहरुले पनि थप छुट दिनेछन्। सबैभन्दा प्रमुख भने वन प्लस, मसाला बिड्स, अमार्य, मंत्र, अर्क, लोट्टो, सिजी लाइफ, बाल्ट्रा, काम्लिंत, म्याकेंरो, र फिलिप्स रहेका छन्।
ग्राहक तथा कर्मचारीको सुरक्षा सुनिश्चित गर्न, दराज अझै पनि सबैभन्दा राम्रो स्वच्छता अभ्यासहरु पछ्याउँदैछ। त्यसैगरी ग्राहकलाई समान खरिद गर्न अघि सधैँ उत्पादनको र विक्रेताको रेटिंग र रिभ्यु जाँच गर्न कम्पनीले सल्लाह दिँदै आएको छ।
सिटिजन्स बैंकको स्वतन्त्र संचालकमा अनिल ज्ञवाली नियुक्त
नेपालमै अक्सिजन सिलिण्डरको उत्पादन परीक्षण सफल
दिल्लीमा केजरीवालाको चमात्कार, संक्रमणदर ७% भन्दा कम
दिल्लीमा कोरोनाबाट बाबुआमा गुमाएका बालबालिकालाई मासिक भत्ता, शैक्षिक खर्च सरकारले व्यहोर्ने
नेपालमा पनि प्लाज्मा थेरापी प्रभावहीन, भेन्टिलेटरमा पुगेको बिरामीलाई रेम्डेसिभिर नदिन सर्कुलर
होम आइसोलेसनमा रहँदा परामर्श र उपचार सेवा चाहियो ? यी नम्बरमा सम्पर्क गर्न सरकारको आह्वान
मौद्रिक नीतिको समीक्षाको परिसंघबाट स्वागत, आर्थिक वृद्धिमा
काठमाण्डौ । नेपाल राष्ट्रबैंकले चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको...
स्टार्टअप वर्ल्डकप नेपालको फाइनल बुधबार, विश्व विजेता बने
काठमाण्डौ । स्टार्टअप वर्ल्ड कपको नेपाल एडिसनको फाइनल बुधबार हुने...
शिवम् सिमेन्टद्वारा हेटौँडा अस्पताललाई अक्सिजन स�
काठमाण्डौ । नेपालकै अग्रणी सिमेन्ट कम्पनी शिवम् सिमेन्ट लिमिटेडले...
एनबीएले प्रदेशका अस्पतालहरुमा अक्सिजन प्लान्ट जडानमा सहयोग
काठमाण्डौ । कोरोना महामारीबाट उत्पन्न परिस्थितिलाई ध्यानमा राखी...
छिमेक लघुवित्तले पायो अन्तर्राष्ट्रियस्तरको ‘स्मार्ट
काठमाण्डौ । छिमेक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडले अन�...
युवा उद्यमी मञ्चद्वारा वीर र त्रिवि शिक्षण अस्पताललाई
काठमाण्डौ । नेपाली युवा उद्यमी मञ्च (एनवाईईएफ) का सदस्यहरुको...
एनआईसी एशियाले ल्यायो ‘उत्तरदायी बनौँ, MoBank गरौँ’ योजना,
काठमाण्डौ । कोरोना महामारीबीच जारी निषेधाज्ञामा एनआईसी एशिया...
ग्लोबल आइएमई लघुवित्तद्वारा कोरोना संक्रमित सदस्यलाई आर्थिक
काठमाण्डौ। ग्लोबल आइएमई लघुबित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडलेले...